बेल्जियम मा ट्रेन द्वारा बीच बिदा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > बेल्जियम मा ट्रेन द्वारा बीच बिदा
एउटा सानो देश को लागि, बेल्जियम हेर्न धेरै सुन्दर दृष्टि संग उत्कृष्ट रेल यात्राको यसको उचित भाग छ. को बेल्जियम तट आराम र घाम आनन्द ठूलो तरिका हो र 65 तट को किलोमिटर, त्यहाँ Indulge धेरै रोमाञ्चक समुद्र तटीय गतिविधिहरु छन्. कुल ब्रेक लिनुहोस् र एक रेल समातेर विकल्प को आफ्नो गन्तव्यमा. यहाँ बेल्जियम मा रेल गरेर राम्रो बीच बिदा केही छन्.
यदि तपाईं समुद्री तटमा बाहिर जानको लागि उत्तम दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ भ्रमण गर्ने हो. पनि "समुद्र मा शहर" को रूपमा जानिन्छ, Ostend भन्दा छ9सुन्दर बलौटे समुद्री तट को किलोमिटर Sunbathing लागि तयार. ठूलो विचरण र दायरा पनि छ संग्रहालयहरु, पसलहरूमा, र रेस्टुरेन्ट शहरमा. बाट 28 जुन सम्म 31 अगस्ट प्रत्येक वर्ष Ostend बालुवा मूर्तिकला गर्न पाहुना खेल्छ तिहार जो मजा धेरै छ! केवल एक ब्रसेल्स देखि छोटो रेल सवारी, Ostend एक समुद्र तट-शहर अनुभवको लागि सही छ.
Ostend गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प Ostend गाडिहरु गर्न
एम्स्टर्डम Ostend गाडिहरु गर्न
Ostend गाडिहरु गर्न ब्रुग्स
तपाईं ब्रसेल्स मा एक रेल मा हप यदि तपाईं वरिपरि Knokke-समान आफूलाई पाउनुहुनेछ 50 मिनेट पछि. यहाँ एउटा छैन, तर5तपाईं को लागि प्रतीक्षा राम्रो समुद्र तट. यो क्षेत्र सबैका लागि केहि छ, एक गोल्फ कोर्स सहित, कला ग्यालरीमा, एक क्यासिनो, एक सांस्कृतिक केन्द्र र एक अविश्वसनीय प्रकृति आरक्षित Zwin भनिन्छ. यो त धेरै कुराहरू एउटा समुद्र तट छुट्टी लिएर लायक छ.
Knokke-समान गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प Knokke-समान गाडिहरु गर्न
एम्स्टर्डम Knokke-समान गाडिहरु गर्न
Knokke गाडिहरु गर्न ब्रुग्स
ती लागि जो बढी adventurous छन्, डी Hann रिसोर्टमा ठूलो विकल्प छ. ब्रसेल्स मात्र छोटो रेल सवारी, यो समुद्र तटीय शहर सूर्य कुर्सियों र निजी खण्डहरू समुद्र तट को भाडामा उपलब्ध एक आश्चर्यजनक Beachfront प्रदान गर्दछ, साथै आकर्षक एंग्लो-नर्मन शैली कटेज र विला. यो सम्भव छ भाडामा बाइक र चक्र सडक वा तटीय बाटो साथ र दृश्यहरु आनन्द र नूनिलो हावा. एक लागि बाहिरी अनुभव, यो हो सही ठाउँमा.
घेंट Ostend गाडिहरु गर्न
Charleroi Ostend गाडिहरु गर्न
लिले Ostend गाडिहरु गर्न
Ostend गाडिहरु गर्न Liege
यो केही लागि परम समुद्र तट बेल्जियम मा गन्तव्य हुन छ परिवार मजा. यसको व्यापक दायरा लागि चिरपरिचित पानी खेल यस्तो paddling र पौडी रूपमा, डुङ्गा यात्राको, जलयात्रा, माछा, लहर कार्टिङ र सर्फिङ, समुद्र तट र यातायात-मुक्त विचरण साथ साथै धेरै मनोरंजन सुविधाहरु, Nieuwpoort सबैका लागि केहि प्रदान गर्दछ. यो शहर ब्रसेल्स र छोटो देखि पहुँच गर्न सजिलो छ रेल सवारी त्यहाँ तपाईं प्राप्त हुनेछ.
बेल्जियम एक शानदार तट र छ रेल पहुँच त्यहाँ सबै रही बनाउँछ अधिक रमाइलो र तनाव मुक्त! त्यहाँ प्रयास गर्न सबैलाई र सधैं केही नयाँ अनुरूप एक समुद्र तट गन्तव्य हो. बेल्जियम मा रेल द्वारा यी बीच बिदा को एक भन्दा बढी सुखद के हुन सक्छ?
घेंट डी Panne गाडिहरु गर्न
Charleroi डी Panne गाडिहरु गर्न
डी Panne गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
डी Panne गाडिहरु गर्न Liege
बेल्जियम सारांश मा ट्रेन द्वारा बीच बिदा
Saveatrain.com जाने हाम्रा सबै विशेष रेलका भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#समुद्र तट छुट्टी ट्राभेलबिजियम